Xildhibaano iyo siyaasiyiin caan ah oo loo diiday inay galaan Madaxtooyada | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Xildhibaano iyo siyaasiyiin caan ah oo loo diiday inay galaan Madaxtooyada
Xildhibaano iyo siyaasiyiin caan ah oo loo diiday inay galaan Madaxtooyada
Maqribnimadii xalay ilaa iyo fiidkii albaabka hore ee xarunta madaxtooyada waxaa dib uga laabtay Guddoomiyaha aqalka Sare Md. Cabdi Xaashi, Prof. Cali Maxamed Geedi, iyo xubno kale, kaddib markii lagu amray inay dib uga laabtaan.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in ilaalada madaxtooyada Villa Somalia loo gudbiyay liiska madaxda Dowladda ka tirsan ee loo ogol yahay inay gudaha galaan, iyadoo labadaan mas’uul xitaa hadii ay ka degteen gaarigii ay saarnaayeen si ay ula hadlaan ilaalada ay ka biyo diideen dalabkooda.
Sidoo kale in ka badan 45-Mudane oo ka tirsan labada aqal ee Baarlamaanka ayaa iyana laga hor istaagay inay gudaha u galaan xarunta madaxtooyada, kaddib markii ciidamada ilaalada ay u sheegeen inaysan amar u qabin sii deynta xildhibaanada.
Falalka is hortaagga ilaalada madaxtooyada ee madaxda Dowladda oo bilowday maqribnimadii shalay ayaa socda ilaa iyo saaka, iyadoo xubnaha loo diiday madaxtooyada ay si weyn uga caroodeen tallaabadaasi.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegayaa inuu Madaxtooyada ka mamnuucay cidii uusan u arkin in ay ka mid tahay taageerayaashiisa